Mizzima TV Weekly, Business News No .6(Sat9February , 2013) | OurGoldenNews.com
Mizzima TV Weekly, Business News No .6(Sat9February , 2013)
အပတ်စဉ် စီးပွားရေးသတင်း (၆)
ဒီ တပတ်အတွက် တင်ဆက်ပေးသွားမယ့် သတင်းတွေထဲမှာတော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ကြွေးရှင်နိုင်ငံတွေဟာ အကြွေးတွေ လျှော့ပေးတော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်း၊ ကမ္ဘာ့ဘဏ်လုပ်ငန်းစုအနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကို အတိုးနှုန်းမဲ့ချေးငွေတွေနဲ့ အကူအညီတွေ ပေးသွားတော့မယ့်သတင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်ဝင်ရောက်မှုတိုးလာပြီးနောက် ဘယ်လိုပြဿနာတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရပြီလဲ ..စတဲ့ သတင်းတွေအပါအ၀င် တခြား စီးပွားရေးဆိုင်ရာ သတင်းတွေကိုလည်း တင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။